Cram : “Ilana adihevitra ny pesta” | NewsMada
Cram : “Ilana adihevitra ny pesta”
“Heverinay fa ny pesta, loza manjo no tokony hanaovana adihevitra”, hoy ny fanambaran’ny Cercle de réflexion pour l’avenir de Madagascar (Cram), omaly.
Raha misy ny vola hatokana hanaovana fitsapan-kevi-bahoaka, tsara raha hampitomboina ny isan’ny “clinique mobile“, indrindra rehefa miditra ny mpianatra an-tanàn-dehibe. Azo havadika “ambulance” izany, halefa any amin’ny faritra mila azy rehefa tapitra ny vanim-potoan’ny pesta ary mety mbola hilaina amin’ny taona ho avy.
Hampiana ny olona mandray ny telefaonina lah. 910 fa tena mampimenomenona, hividianana fanamiana amin’ny fiarovana ny pesta ireo mpianatra ho mpitsabo, hefaina ny vatsim-pianarany, jerena manokana ireo mpiandry amin’ny alina eo anivon’ny hopitalin’ny pesta, hampiana tosika ny sosialim-bahoaka manoloana ny fidangan’ny vidim-piainana…
“Haroso ny volana septambra 2018 ny fifidianana filoham-pirenena”, hoy ny Cram momba ny fifidianana filoham-pirenena. Hanontaniana ny hevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) sy ny mpanao politika rehetra ny amin’izany. Ho an’ny tombontsoam-pirenena, efa neken’ny mpanao politika ny “Ni… ni... “, ny tondrozotra, ny fanambarana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana depiote tamin’ny Tetezamita. Hitakiana fitsapan-kevi-bahoaka ve ny datin’ny fifidianana?
Maka ny hevitry ny HCC ny mpanao politika rehetra, rehefa avy mivory ka resy lahatra fa hatambatra ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny lalàmpanorenana. Mba hialana amin’ny fandaniam-bolan’ny firenena izany.